Glass Beads For Hot Melt Paints China Manufacturers & Suppliers & Factory
Glass Beads For Hot Melt Paints - mpamokatra, orinasa, mpamatsy avy any Shina
(Total 24 vokatra ho an'ny Glass Beads For Hot Melt Paints)
Kitapo maitso lehibe 20-14 mesh Large Beads
Ity diamondra ity fanenon-jiro ity dia roa na telo heny noho ny kofehy mahazatra. Ny ampahany tsy mihoatra lavitra noho ny loko dia avo kokoa noho ny kofehy mahazatra; Noho izany dia nitombo ny fisainana momba ny mari-pamaharan'ny lalana, indrindra any amin'ny faritra misy orana sy mahatsiravina. Ny habe dia...
Size Range 0.85-1.4mm Big Glass Beads Ity diamondra ity fanenon-jiro ity dia roa na telo heny noho ny kofehy mahazatra. Ny ampahany tsy mihoatra lavitra noho ny loko dia avo kokoa noho ny kofehy mahazatra; Noho izany dia nitombo ny fisainana momba ny mari-pamaharan'ny lalana, indrindra any amin'ny faritra misy...
Glass Beads for Polishing Polishing Grinding Media
Glass Beads for Polishing Polishing Grinding Media Ny fampiasana fitaovam-pandrika vita amin'ny glas dia ampiasaina indrindra ho an'ny mpanaparitaka, ny fampiroboroboana ny haino aman-jery indostrialy, toy ny fananganana, ny loko, ny loko, ny poti-javatra, ny hodi-kazo, ny teknika simika, ny tombontsoa azo avy...
Glass Bead Grinding Material Sandblasting Shot Blasting
Glass Bead Grinding Material Sandblasting Shot Blasting Fipoahana 20-30 # 20-40mesh 30-40 # 40-50 # 50-70 # 60-80 # 70-100 # 80-120 # 100-170 # 120-200 # 140-230 # 170-325 # Famaritana momba ny perla fanosotra tsy misy loko Vorona vita amin'ny goro (Glass Bead) dia be dia be noho ny toetra tsy manam-paharoa...
Glass Beads For Hot Melt Paints Glass Beads For Road Paint glass beads for hot-melt paints Glass Beads for Road Marking Glass Beads for Machine Glass Beads for Highway Markings Glass Beads for Roadmarking Paint Glass Beads For Marking Road